50 EMA Forex Swing Trading Strategy | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya / Forex Strategies / 50 EMA Forex Swing Trading Strategy	50 EMA Forex Swing Trading Strategy
Posted on October 1, 2016 by Forex Editor e Forex Strategies, Forex Swing Ukuhweba Strategies nge 0 Amazwana
Lena isu jika Ukuhweba okulula kakhulu nokusebenzisa singasebenza kunoma iyiphi ngazimbili lwemali. Lolu uhlelo kusebenza kuzo zonke izikhathi okuzoqala. Lokhu kuphumelela kuphela ngesikhathi emakethe eziyi.
Intengo Kumelwe uliphule ngaphezu 50 UMAMA.
I lwezibani ukuthi ephula 50 EMA iyona entry lwesibani.
Beka i-stop order Thenga 5 Pips ngaphezu okusezingeni entry lwesibani.
Indawo stop ukulahleka 5 Pips ngezansi ongaphakeme entry lwesibani.
Intengo Kumelwe uliphule kanye ngezansi kwebhokisi elithi 50 UMAMA.
Beka i-ethengisa stop order 5 Pips ngezansi ongaphakeme entry lwesibani.
Indawo stop ukulahleka 5 Pips ngaphezu eziphakeme entry lwesibani.
Zikhona ongakhetha ukuphatha kanye uphume isikhundla sakho zizo:
Moving stop-kulahlekelwe Breakeven. Lolu khetho ngokuvamile eyeka out isikhundla sakho.
Ungenza indlela stop. Mane unyakazise ukulahlekelwa stop at jika odlule.
Lokhu kuhle ukusebenzisa emakethe eziyi.
Lena inkomba kan-. Intengo izoba kakade sithuthe ngaphambi le nkomba anganika isignali.
Lokhu akukuhle emakethe non-yinjwayelo.
50 EMA Forex Swing Ukuhweba Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
50 EMA Forex Swing Ukuhweba Isu inikeza ithuba lokuthi bazokwazi ukuhlonza izici ezihlukahlukene futhi amaphethini amanani dynamics okuyizinto ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka 50 EMA Forex Swing Trading Strategy?
Thwebula 50 EMA Forex Swing Ukuhweba Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha 50 EMA Forex Swing Trading Strategy
Uzobona 50 EMA Forex Swing Ukuhweba Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
Abanye Forex Strategies5 EMA futhi 8 EMA Crossover Forex Swing Trading Strategy200 EMA Forex Swing Trading StrategyParabolic-SAR Inkomba Forex Swing Trading Strategy10 Futhi 20 SMA With 200 SMA Forex Swing Trading StrategyNgaphakathi Bar Forex Swing Trading StrategyIshadi Daily Forex Swing Trading Strategy20 SMA nge RSI Forex Swing Trading StrategyInani Action Forex candlestick Strategy